Soo dejisan Stride 1.22.77 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Stride
Stride – wargeeye ganacsi ayaa diiradda saaray hagaajinta shaqada iyo isdhexgalka shaqaalaha. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto joornaal kooxeed oo u qaybsan xuduudaha gebi ahaanba khilaafsan halkaasoo aad la xiriiri karto oo aad la wadaagi karto faylasha Wareeggu wuxuu awood u leeyahay inuu abaabulo shirarka codka iyo fiidiyowga isagoo taageero ka helaya bandhigyada bandhigga. Barnaamijka waxaa ku jira habka farsamaysan oo haya farriimaha soo socda iyo waxyaabo kale oo ka soo horjeeda shaqaale waqti go’an. Arsenide Stride wuxuu leeyahay qalab lagu faalloayo laguna habeeyo sawirada wada hadalka iyo sidoo kale maareynta hawsha maareynta howlaha dabagalka ee farriinta. Software-ka ayaa taageeraya qalabixinta alaabooyinka kale ee Atlassian iyo adeegyo kala duwan oo ka yimaada kuwa horumarinta saddexaad.
Kala saarida joornaalka koox ahaan maado ahaan
Kulanka codka iyo codka
Fariin muuqaal ah ku samee sawirka
Soo dejisan Stride
Faallo ku saabsan Stride
Stride Xirfadaha la xiriira